This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၂-၂၀၁၃) နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၂-၂၀၁၃)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်တွေတွေ့ဆုံ၊ သမ္မတရဲ့ အမေရိကန် ခရီးစဉ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ အမေရိကန်ရဲ့ ပိတ်ဆို့အရေး ယူမှု အပေါ် ပြည်တွင်းကုန်သည်တွေ သဘောထား၊ ပြည်တွင်း မီဒီယာတိုးတက်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်အကဲစမ်းမှုများ ... စသည် ထိပ်တန်းသတင်းများ ငှက်တုပ်ကွေးကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဒေါ်လာ သန်း ၆ ထောင် နစ်နာ မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာကောင်း IMF ခန့်မှန်း မိတ္ထီလာ ပုဒ်မ ၁၄၄ သက်တမ်းတိုး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ဆီနိတ်တာ McConnell ဆန့်ကျင် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးစစ်သား အသုံးပြုမှု ပပျောက်ရေး တိုးတက်မှုရရှိ မိတ္ထီလာအရေးအခင်း အစိုးရကိုင်တွယ်ပုံ ဒေါ်စု ဝေဖန် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ မိတ္ထီလာအရေးအခင်း အစိုးရကိုင်တွယ်ပုံ ဒေါ်စု ဝေဖန် Oklahoma လေဆင်နှာမောင်း လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံး အမေရိကန် မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုး သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ပြစ်ဒဏ်များ ဆက်လက်ချမှတ်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများ Oklahoma လေဆင်နှာမောင်း လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံးအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၂-၂၀၁၃) သမ္မတဦးသိန်းစိန် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ဟောပြောပွဲ ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး သမ္မတ ခရီးစဉ်အပေါ် အမြင်များ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မြန်မာတီဗွီသတင်း ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ VOA60 World